आईपीएल कपाल हटाउन को घर को रहस्य - टेक्निकल जानकारी - शेन्ज़ेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
आईपीएल कपाल हटाउने घर प्रयोग को रहस्य
समय: 2020-07-08 हिट्स: 4
पहिले हामीले स्थायी कपाल हटाउने, स्थायी कपाल हटाउने अवधारणा बुझ्नु पर्छ: यसको वास्तविक अर्थ भनेको केशको बृद्धि चक्रको बेला कपाल फेरि गुम्दैन, जसलाई मानिसहरूले बजारमा कहिल्यै बढ्न नपरोस् भनेर बुझेका हुन्छन्। मेडिकल अर्थमा स्थायी कपाल हटाउन सकिन्छ तर यो आदर्श हो भने यो कुनै पनि टेक्नोलोजीद्वारा हासिल गर्न सकिदैन।
नोबल घरपरिवार कपाल हटाउने बारेमा कसरी?
मूल्य मध्यम छ, गुण फिलिपहरू र अन्य प्रसिद्ध डिपिलेटरसँग तुलना गर्न सक्दछ। त्यसकारण, यो भन्न सकिन्छ कि यो उच्च गुणवत्ता र कम मूल्यको छ,4हप्तामा प्रभावी हुन्छ। आयातित सामग्री, धेरै डिपाइलेटरहरूसँग तुलनाको लागि, घरका डिप्रेलेटरहरू जनताका लागि योग्य छन्।
के नोबल डिपिलेटर आयात गरिएको छ?
नोबल डिपिलेटरको शेल बॉडी चीनमा बनेको छ, तर गुण उच्च छ, र शरीर भित्रका केही अंशहरू आयात गरिन्छन्। वास्तवमा, धेरै विदेशी ब्रान्डहरू पनि आफ्नै अनुसन्धान र विकास हो, चीन खोज्दै, त्यसैले उत्पादन महत्त्वपूर्ण वा व्यावहारिक छ।
हालको विश्वव्यापी कपाल हटाउने बजारमा, लेजर डिपाइलेटर टेक्नोलोजीलाई सबै भन्दा उन्नत डिपिलेशन टेक्नोलोजीको रूपमा मान्यता दिइन्छ, weeks हप्ता प्रयोगमा स्पष्ट परिवर्तन हुनेछ, र पीडारहित रहन्छ।
कसरी Ipl कपाल हटाउने बारेमा?
आईपीएल छालामा कार्य गर्दछ, छनौट रूपमा कपालमा melanin द्वारा अवशोषित, र तापमान वृद्धि हुन्छ। सामान्य छालाको टिशूलाई असर नगर्ने आधारमा, कपालको जरा कार्बनयुक्त र सडिसकेको हुन्छ र केशमा निप्पललाई कपालमा पोषक प्रदान गर्न रोकिन्छ, ताकि स्थायी कपाल हटाउने प्रभाव प्राप्त गर्न। यो वर्तमानमा निराशाको सबैभन्दा वैज्ञानिक र प्रभावी विधि हो।
डिपिलेटर चुनिंदा फोटोथर्मल डायनेमिक्सको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, लेजर तरंगदैर्मा उर्जाको माध्यमबाट छालाको सतहबाट कपालको जरामा जान सकिन्छ, कपालको ऊतकको तापमा विनाश हुन्छ, त्यसैले त्यो बृद्धि हुन्छ। कपाल जलाइएको थियो।
अघिल्लो: कसरी आईपीएल डिप्रेलेटर प्रयोग गर्ने? तपाईंले कुन कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ? यहाँ तपाइँलाई यो कसरी गर्ने भनेर बताउँछ
अर्को: कसरी घरेलू आईपल कपाल हटाउने को उपयोग गर्ने? तपाईंले कुन कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ? तपाईंले उत्तर जान्न आवश्यक छ